Maxaa ka jira in ciidamada daraawiishta Galmudug u gadoodeen is-casilaadii Fiqi? | Dalkaan.com
Home Warkii Maxaa ka jira in ciidamada daraawiishta Galmudug u gadoodeen is-casilaadii Fiqi?
Maxaa ka jira in ciidamada daraawiishta Galmudug u gadoodeen is-casilaadii Fiqi?
Gaalkacyo (dalkaan) – Ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa xalay gadooday, iyaga oo la wareegay kastamka canshuuraha lagu qaado ee Koonfurta magaalada Gaalkacyo ee Galmudug.
Koontoroolka ay Ciidamada gadoodsan la wareegeen ayaa waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan Booliska Galmudug, hayeeshee ay si nabad ah uga tageen markii ay u yimaadeen ciidamada ka tirsan daraawiishta maamulka Galmudug.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle ayaa sheegay in Ciidamada ay ka gadoodeen mushaar la’aan ay ka cabanayaan kadib markii Ciidamada kale ee Galmudug uu mushaarka u soo dhacay.
Axmed Falagle waxa uu kala fogeeyay wararka la isla xiriirinayo ee ah Ciidanka Gadoodka ka sameeyay Gobolka Mudug iyo is-casilaadda Wasiirkii Amniga Dowladda Galmudug, sida uu hadalka u dhigay Wasiir Falagle.
“Gadoodka Ciidanka lug kuma laha is casilaadda Wasiirkii Amniga, balse gadoodkoodu waxa uu salka ku hayaa mushaarka oo kasoo daahay, xalkooda ayaa la wadaa si loo siiyo xuquuqdooda,” ayuu yiri Wasiir Falagle.
Dhowr jeer ayaa Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug ee ku sugan degaannada Mudug iyo Galgaduud ay sameeyeen gadood, balse markii dambe la xaliyay.
Wasiirka Warfaafinta Galmudug ayaa dhanka kale tilmaamay in la kordhinayo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, arrimaha ciidanka ee taagan ay yihiin kuwo lagu xoojinayo xasiloonida sida uu hadalka u dhigay.
Golaha Wasiirada Galmudug oo uu shir Guddoomiyay Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoorayaa diiradda lagu saaray Xaaladda guud ee Amniga iyo Arrimaha Doorashooyinka, sida lagu sheegay qoraal kulankaas kaddib sida ay shaacisay Madaxtooyada Galmudug.
Previous articleEden Hazard oo Xalay Ku Dhaawacmay Kulanka Xulkiisa ee ka hortagay Faransiiska, Cuqubo ku habsatay Xidigan
Next articleWararkii ugu dambeeyey Ahlu Sunna oo weerar ku ah Jaw Burujeed iyo Daadaale
Saraakiil dhaawac ah oo isbital lagala baxay iyo wararkii ugu dambeeyey dagaalka Guriceel
Maxay ka wada hadleen Rooble iyo wafdigii QM? + Sawirro
Xasan Sheekh Maxamuud oo war ka soo saaray dagaalka GURICEEL
Xasan Sheekh oo war kasoo saaray dagaalka GURICEEL
Geeridiisa ka hor: Ama geeri ama gurigeyga
Al-Shabaab oo meel fagaare ah ku toogatay Cabdishakuur Muxumed
Wararka Suuqa Maanta: Real Madrid oo Dalab Waali ah u soo...
dalkaan_2ujpzr - October 17, 2021 0
Ku soo dhawaada Wararka Suuqa kala iibsiga ee Ciyaaraha Caawa oo aad Habeen walbo kala socotaan Warbaahinta Ciyaaro.com Real Madrid ayaa u soo bandhigi doonta xiddiga...
Chelsea oo Diyaarineysa Dalab ay ka Gudbiso Xidiga Ferland Mendy
Xavi: Markii Barcelona ila soo Xiriirtay, waxaan ahaa tababare saddex bilood...
TPLF oo war kasoo saartay duqeynta ay diyaaradaha Itoobiya ee gobolka...
Hordhac: Club Brugge Vs Manchester City Ee Champions league-ga, Guruubka A...
Daawo: Hooyo Qaali oo shaacisay arrin ay maxkamadda ciidamada ku war-gelisay
Jesse Lingard oo Shaaca ka qaaday Qorshihiisa Cusub ee Manchester United
Sidee lagu xaliyey muranka kuraasta Aqalka Sare ee ka harsan HirShabelle?
Shan qof oo caawa ku geeriyootay Hargeysa iyo dhaawacyada 8-kale (Daawo)
dalkaan_2ujpzr - October 16, 2021 0